မြန်မာနိုင်ငံ၌ နျူကလီးယားလက်နက် မလိုအပ်ဟု NLD ပြော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » မြန်မာနိုင်ငံ၌ နျူကလီးယားလက်နက် မလိုအပ်ဟု NLD ပြော
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နျူကလီးယားလက်နက် မလိုအပ်ဟု NLD ပြော
Posted by True Faith on Jun 9, 2010 in Politics, Issues |5comments
်မာနိုင်ငံ၌ နျူကလီးယားလက်နက် မလိုအပ်ဟု NLD ပြော်မြန်မာနိုင်ငံ၌ နျူကလီးယားလက်နက် မလိုအပ်ဟု NLD ပြော
ဖနိဒါ	| အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၀၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၆ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် နျူကလီးယားလက်နက် စီမံကိန်းအစား ပြည်သူများ လက်တွေ့ ခံစားနေရသည့် ဒုက္ခများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသင့်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးက ပြောသည်။
“အမှန်ကတော့ လူတွေ ငတ်ပျက်နေတာ။ မီးရေမလာတာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးစမ်းပါဗျာ။ အဲဒါတွေ လုပ်ပေးရင် သူတို့ကို လေးစားဂုဏ်ယူမှာပါ” ဟု ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦး က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံမဟုတ်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်သည့် သိပ္ပံပညာရှင်များ မရှိ သေးခြင်းတို့ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
“အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ဆိုရင်လည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးနေတာဘဲဗျာ။ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းတွေ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်နိုင်မှ စဉ်းစားရမဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ပေါတီးပေါ့စလုပ်တတ်တာ တွေရှိတော့ မတော်တဆ ဖြစ်ရင်လည်း သိပ်အန္တရာယ် ကြီးမားပါတယ်” ” ဟု သူက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် နျူကလီးယား နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တက်ရောက်ရန် စစ်တပ်မှ ရွေးချယ်၍ ရုရှနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်သည်မှာ ၁ဝ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် “အထိုက်အလျောက်” တတ်မြောက် လာပြီး လက်နက် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး စတင်လုပ်ဆောင်နေပုံရသည်ဟု သူက သုံးသပ်သည်။
ယခု နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ၌ ပြည်ပသို့ထွက်လာသူ မကွေးတိုင်း မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လျို့ဝှက်လက်နက် ထုတ်စက်ရုံမှ အကြီးအကဲတဦးဟု ဆိုသူ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းက စာရွက်စာတမ်းနှင့် ဓာတ်ပုံ အထောက်အထားများကို နော်ဝေအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ DVB သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ယင်းကို အယ်လ်ဂျာဇီးယား ရုပ်မြင်သံကြားမှ ယခုလ ၄ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်သွားသည်။
ကမ္ဘာ့နျူကလီးယားဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို စောင့်ကြည့် ကြပ်မတ်နေသော နိုင်ငံတကာ အနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA အဖွဲ့ကြီး၏ ဒါရိုက်တာဟောင်း ရောဘတ် ကယ်လီကလည်း ယင်း အထောက်အထားများအရ စစ်အစိုးရသည် နျူကလီးယားလက်နက်အတွက် လိုအပ်သော ယူရေနီ ယမ်သတ္တု ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ထင်ရှားသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှ နျူကလီးယား လက်နက်ကင်းရှင်းရေးဇုံ Treaty on South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) ကို ၁၉၉၅ ခု ဘန်ကောက်တွင် ကျင်းပသည့် ASEAN အစည်းအဝေး၌ လက်မှတ်ထိုးထားသည်။
နောက်ဆုံးထွက်လာသည့် အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ IAEA က လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက စစ်အစိုးရအား မေးမြန်းစုံစမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်တုံးကို ငရုပ်ဆုံနဲ့ထောင်း၊ ဆန်ကောနဲ့ဝုိုင်းပြီး ဇကာနဲ့တိုက်လိုက်ရင် ယူရေနီယံတွေထွက်လာမှာပါ … အဘရယ်။ ဘာမှ စိုးရိမ်မနေပါနဲ့။ အန္တရာယ် ရှိပါဘူး…ဟီး
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း ကနှူကရီးယားပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်တော့ ရေဒီယိုသတ်တိကြွတွေအကြောင်းလည်း သိပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်က ယူရေနီယန် သဘာဝအလျှောက်ထွက်နေတာမို့နည်းပညာနဲ့ ငွေကြေးမပြည့်စုံပဲ သွားလုပ်ရင် နောင်အနှစ် ၃-၄-၅ဆယ်မှာ နှူစွန့်ပစ်စည်းတွေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ မြန်မာ့မြေမှာ မြန်မာတွေ ကင်ဆာဖြစ်တာတို့။ ကလေးတွေကိုယ်ခန်ဒါတွေ ပြတ်တောက်မွေးလာတာတို့ နဲ့ မျိုးရိုးဇာတိ၊ ဗီဇတွေ ညံ့ကုန်နိုင်တာမို့ အမျိုးသားရေးတာဝန်တရပ်အနေနဲ့ ဖေါ်လိုက်တာလို့ ထင်ပါတယ်။
ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲလိုချင်တာမျိုးအမိန့် နဲ့ မရတဲ့ ကိစ်စပါ။ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေလည်း ငယ်ငယ်နဲ့ သေကုန်ပါလိမ့်မယ်။
နှူရောင်ခြည်သင့်ရင် ကုရာနတ်တိ ဆေးမရှိပါဘူး။
အဲဒါမျိုးးက ပရုတ်ဆီလိမ်း၊ ပယောဂဆေးကြိမ်နဲ့ရိုက်ကုလို့လဲ မပျောက်ပါဘူးခင်ဗျား။
this article is right… Myanmar doesn’t need Nuclear bomb …but it extremely need water,electricity and human rights…. the junta are very inhuman and cruel …. they only think for themselves …but they didn’t realize that we all have to drop and separate our fame, money, power, family and everything when we died ….. they supposed to be forgotten the death process …..